I-La Petite Merveille 1840 - I-Airbnb
I-La Petite Merveille 1840
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChloé & Lucas
ILa Petite Merveille 1840 ibekwe entliziyweni yesithili selifa lemveli yaseSainte-Rose yakudala.
Hamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile kwaye undwendwele iivenkile ezintle ezigcwele ubuncwane bakudala, fumana iindawo zokutyela ezithambileyo kwaye ujonge ubutyebi boyilo lwesithili.
Udlamkile kakhulu, ebusika nasehlotyeni, imisebenzi emininzi iyafumaneka kuwe unyaka wonke. Kuya kuba luvuyo lwethu ukucebisa iindawo zethu esizithandayo kuwe!
CITQ # 302117
Indawo yokuhlala encinci eqaqambileyo eyakhiwe ngo-1840 ihonjiswe ngoku. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ikulungele ukukwamkela.
Thatha ithuba lokuthengisa eSainte-Rose Boulevard ukuze ufumane esi sithili siyimbali sibalaseleyo esinobuntu baso obahlukileyo. Lo mmandla uhlala udlamkile ngokwemisebenzi, iminyhadala kunye nolonwabo unyaka wonke.
Kufuphi neevenkile ezincinci ezinomtsalane: ikhefi, iindawo zokutyela, i-bagelerie, ikhrimu, igalari yobugcisa, iivenkile zakudala nokunye! Iivenkile zokutya, ikhemesti, iivenkile eziluncedo, iindawo zokuthenga kunye nezikhululo zegesi nazo zikufutshane kakhulu apho.
-Parc de la Rivière-des-Mille-Îles (iphenyane, i-kayak, isikhephe esinyovwayo, isikhephe esibhexwayo kunye nokuloba, ibhodi yokubheqa ye-SUP, ukutyibilika kwilizwe elinqumlayo, ukushushuluza ekhephini)
-Bois de l'Équerre (Iindlela kunye nezihlangu zekhephu)
Umbuki zindwendwe ngu- Chloé & Lucas
Ukuba kukho nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho okanye ukuba unemibuzo, nceda uqiniseke ukuba uya kukwazi ukunxibelelana nathi ngaphandle kwengxaki.
Inombolo yomthetho: #302117